KSmoothDock: Dock fudud oo qurux badan oo loogu talagalay Plasma 5 | Laga soo bilaabo Linux
Isticmaalayaasha aan ku raaxeysaneyno Plasma 5, kama daali doonno helitaanka waxyaabo cusub oo aan u arko inay ka mid yihiin jawiga desktop ugufiican maanta. Markan waxay ahayd markiisa KSmoothDock fudud laakiin qurux badan ku xir meesha Plasma 5, oo aan ku cusbayn adduunka KDE, laakiin loo sii daayay inuu la jaan qaado Plasma 5.
Markabkani waa mid ku habboon in lagu buuxiyo Lux mawduuc weyn oo loogu talagalay Plasma 5, isku darka labada isku dar ayaa na siin doonta muuqaal fiican iyo adeegsi ballaaran oo ku aaddan bey'adda desktop-ka weyn oo wax ku ool ah.
1 Waa maxay KSmoothDock?
2 Sida loo rakibo KSmoothDock
Waa maxay KSmoothDock?
Waa xayndaab fudud oo qurux badan Plasma 5 gebi ahaanba bilaash, kuna qoran C ++ iyo Qt 5, loogu talagalay Wuq Dan, Waxay leedahay guddi qaabeyn fudud oo aan ku xulan karno goobta Dock-ka, ku darno waxyaalo cusub iyo codsiyo si aan u shaqeyno, u beddelno cabbirka astaamaha iyo noocyada, iyo sidoo kale xulashada midabka dekedda.
KSmoothDock waxay ku yaali kartaa meelo kala duwan oo ka mid ah jawigayaga desktop, waxay leedahay saameyn baaxad leh oo muuqaal leh iyo muuqaal qurxoon oo muujinaya qaabka macnaha guud.
Shaashadaha soo socda ayaa hubaal ka dhigaya rabitaankaaga cuntada si aad isugu daydo iftiinkan, dekedan fudud ee quruxda badan, oo si heer sare ah xirfad ahaan loo soo saaray loona baahan yahay dadka isticmaala inay sii fidaan
Sida loo rakibo KSmoothDock
Ku rakibidda KSmoothDock waa wax iska fudud, waxaan u baahannahay oo keliya in la rakibo xirmada dhammaystiran ee Plasma 5 oo sidoo kale la sameeyo si loo soo ururiyo. Kadib waa inaan raacnaa talaabooyinka soo socda:
Clone kaydinta rasmiga ah:
Dhis KSmoothDock koodhka isha:
$ cmake src $ samee
Ku rakib KSmoothDock:
Orod ksmoothdock oo bilaw inaad ku raaxaysatid.
Markaanu rakibno dekeddayada ugu wanaagsan ee Plasma 5, waxaan uqeexin karnaa sida aan ujecelnahay, isticmaalka kheyraadka aad ayuu u hooseeya waana la qabsan karnaa baahiyaheena, tani shaki la'aan waa bedel weyn oo loo maro Plank iyo meelaha kale ee caanka ah ee caanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » KSmoothDock: Dakad fudud oo qurux badan oo loogu talagalay Plasma 5
Waa salaaman tahay, ma loo baahan yahay in la rakibo Qt5 si loo rakibo dekedda?
Waad ku mahadsantahay boostada iyo caawinta